नेकपाको साइनबोर्ड हटाएर धमाधम एमालेको राखिँदै - नागरिक रैबार
नेकपाको साइनबोर्ड हटाएर धमाधम एमालेको राखिँदै
काठमाडौँ– नेकपा नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष नेकपा एमाले ब्यूँताउन लागिपरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो ।
विभिन्न जिल्लामा रहेका पार्टी कार्यालयमा नेकपाको साइनबोर्ड हटाएर नेकपा एमाले लेखिएको साइनबोर्ड राख्न थालिएको छ । मकवानपुर, मोरङ, नुवाकोट, पर्वतलगायतका जिल्लामा ओली पक्षका कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा नेकपाको साइनबोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राखिएको हो ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू दुई खेमामा विभाजित भएका थिए ।
ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्नो समूहलाई नेकपाको आधिकारिक पार्टी भएको दावी गर्दै आएको अवस्थामा आइतबार सर्वोच्च अदालतले कट्टेल नेतृत्वको नेकपासँग नाम मिलेको भन्दै खारेज हुने फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि उत्साही देखिएको ओली पक्षले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको र २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरेको छ।
ओली समूह छाडेर प्रचण्ड–नेपाल समूहमा फर्किए सुदूरपश्चिमका सांसद जोशी
प्रधानमन्त्री भन्छन् : मेरो पार्टी कुन हो, अदालतलाई सोध्नू
कार्यालय प्रमुख पुगे गौमुल गाउँपालिकाको अन्द्राडीमा
रजनीकान्तलाई ‘दादा साहेब फाल्के अवार्ड’
पत्रकार शाहीको अभिनयमा म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड पनि मालिकाकै हातमा
नयाँ वर्षकै दिन मार्तडीमा नयाँ कम्प्युटर ईन्सिच्युट संचालनमा
विश्वासको मत लिनैपर्ने हो ?
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा १७ सय ३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यही अवधिमा ११ जनाको मृत्यु भएकाे रिपाेर्ट प्राप्त भएकाे छ । ८ हजार ५५ जनाको पीसीआर तथा ६८३ जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा क्रमशः १६६७ र ६९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा २ लाख ८७ हजार ५६७ […]
सार्वजनिक ठाउँमा ‘नथुक्न’ काठमाडौं प्रशासनको आग्रह
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घर तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी नथुक्न काठमाडौंवासीलाई आग्रह गरको छ । नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड–१९ संक्रमण नेपालमा पनि बढेको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रणका लागि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । प्रशासनले काठमाडौंमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेको छ । प्रयोग गरेको मास्क जथाभावी नफाल्न […]
बढ्दैछ कोरोना, चल्दैछ जात्रा !
नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सोमबार निर्णय गर्‍यो – मेला, महोत्सव, जात्रा, पर्व, विवाह, न्वारान, पास्नी, ब्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठान, मलामी लगायतका अत्यावश्यक परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा २५ जनाभन्दा बढी नहुने । ​तर, सरकारको उक्त निर्णयको उल्लंघन दोस्रो दिनबाटै सुरु भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट सरकारी नियमको […]
कारबाहीको शृङ्खलाले पार्टीमा गम्भीर संकट : गोकर्ण विष्ट
७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले संवादहीनता र कारबाहीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि विष्टले यसले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट पैदा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विज्ञापन ‘यस्ता कारबाहीका शृङ्खलाहरुले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ’, […]
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : पारिश्रमिक कम हुँदा काम गर्नै मान्दैनन् युवा
७ वैशाख, बागलुङ । दिनभर गोरु खेद्न सके बेलुका पारिश्रमिक ८५० रुपैयाँ आउँछ । न त तोकिएको काम सक्नैपर्ने दबाब न त कसैले काम लगाउँछ । निर्माणको सीप भएकाले घण्टाका हिसाबमा ज्याला लिन्छन् । बेरोजगार युवाका लागि मौसममा चल्ने कामले मात्रै खर्च चल्दैन । बेमौसममा खाली बसेका युवाले काम पाउँदा नगर्ने भन्ने कुरै रहेन । […]
कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि वडा कार्यालय बन्द
७ वैशाख, काठमाडौं । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१ का ६ जना कर्मचारीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । ८ जना कर्मचारी मध्ये ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जोखिमलाई मध्यनजर राखेर परिस्थिति अनुकुल नभएसम्मका लागि वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा बन्द गरिएको वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘वडाका ६ […]
१२ औं राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्डः मालिका नमुना माविको आपत्ति
ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणबारे माधव समूहको तीन निष्कर्ष
एमाले विभाजन : घोषणा मात्रै बाँकी !
विचित्रको प्रविधि : मास्कबाट बनाइँदैछ एक किलोमिटर सडक !
कुशल भुर्तेलले बनाए लगातार तीन खेलमा अर्धशतक